Mareykanka Oo Awoodiisa Gacantiisa Ku Burburinaya | Xaqiiqonews
Mareykanka Oo Awoodiisa Gacantiisa Ku Burburinaya
Ninka Falanqeeya Siyaasadda Farid Zakaria ayaa sheegay in laga soo gudbay watigii Mareykanka uu lahaa Isbaheysiga Xoogan Lana joogo wati Washington ay ku jirto marxaladda “Halka Cirif” oo ay iyada nafteeda isburburineyso.
Farid Zakariya oo maqaal ku qoray Wargeyska Ameerikaanka ah ee “Foreign Affairs” ayaa sheegay in sanadihii dambe oo dhan Awooddii Mareykanka ay sii laciifeysay.
Dhamaadka Quwadda Mareykanka oo sidoo kale ah “Bilwogii Burbrurka” waxa ay soo bilaabatay sagaashameeyadii markii Mareykanka uu faragiliyey Soomaaliya, waxa ay soo martay Ciraaq 2003 xilligaasi oo sida qoraaga uu sheegay ah goortii Mareykanka uu bilaabay in uu kala furfurto.
Zakariye ayaa is weydiiyey su’aashan “Burburka ku socdo Mareykanka ma waxaa uu kaga imaanayaa dibadda, mise waa un Natiijadii Mareykanka uu ka dhaxlay siyaasidiisa ku dhisan cunfiga iyo xoog ku galka?
Fariid Zakariye ayaa tilmaamay dhowr waxyaalood oo ka qeyb qaatay burburinta Mareykanka waxa uuse tusaale u soo qaatay Sida Mareykanka uu isticmaalay ciidankiisa iyo awooddii uu dunida ku lahaa, taasi oo keentay in uu lumiyo isbaheysi badan isagoo dhanka kale shaqeystay cadaawad farabadan.
Intii dhaweyd ee talada waddankaasi uu majaraha u qabtay Donald Trump ayaa Mareykanka waxa uu lumiyey sumacaddii iyo fikirkii ay shaqeysteen 30-kii sano ee ugu dambeysay.
Fariid Zakariye ayaa sheegay in weerarkii 11 Sep sanadkii 2001 lagu qaaday magaalooyinka Newyork iyo Washington iyo soo bixitaanki waxa ay ugu yeeraan “Argagixisada Islaamka” ay ka qeyb qaateen hoos u dhicidda quwaddii Mareykanka.
Qoraaga ayaa hadalkiisa ku soo gunaanuday oraah jees jees ah isaga oo yiri “waxqabadkii ugu weynaa ee siyaasadda Trump ee xagga dibadda waxa ay aheyd “Waxba kama jiraan”